ကြည်ကြည်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: KOBE LUMINARIE အနုပညာလက်ရာမြောက် မီးထွန်းပွဲ...
ဒီတစ်ခါတော့ ဂျပန်က လက်ရှိအနေထားလေး ဝေမျှပါရစေ။
KOBE LUMINARIE (illumination festival ) လေးပါ။
၁၉၉၅ ဇန်န၀ါရီလ ၁၇ ရက်နေ့မှာ magnitude7အဆင့်နဲ့ (KOBE)မြို့ ကို ပြာပုံဘ၀ရောက်သွားစေ
တဲ့ ငလျှင်ကြီးအကြောင်းကြားဖူးကြမှာပေါ့ ….
မြန်မာလူမျိုး နှစ်ယောက် ဆုံးသွားပါတယ်။(ဒါကအချင်းချင်းပြောလို့သိရတာပါ) ။
ငလျှင်ဒဏ်နဲ့သေကံမရောက် သက်မပျောက်ခဲံ့တဲ့ Phd လာယူတဲ့ မြန်မာ အမကြီးတစ်ယောက် ကတော့လက်ရှိ ရန်ကုန်မှာ ဂျပန်ဘာသာသင်တန်းဖွင့်ထားပီး အောင်မြင်နေပါတယ်။ အဲ့ဒီ့တုန်းက ဂျပန်အစိုးရက ဆေးကုသမှုအပြင် အခြားသောထောက်ပံ့ကြေးတွေပါပေးတာသိရပါတယ်။
ကျန်တဲ့ဆုံးသွားတဲ့ မြန်မာ တစ်ယောက်ပါတဲ့ ဂူကိုတော့ မြန်မာတွေ နှစ်စဉ်သွားတဲ့ Koyasan ဆိုတဲ့တောင်ပေါ်မှာတစ်ခါ တွေ့ ဖူးပါတယ်။
အခုရေးမှာက ပြာပုံထဲက KOBEရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအကြောင်းလေးပါ။ ၁၉၉၆ မှာ ဂျပန်ကိုရောက်ပါတယ်။ KOBE သွားလည်တော့ ငလျှင်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ KOBE ၊ မြန်မာပြည်က စာတွေမှာမြင်ဘူးတဲ့ KOBE ပုံနဲ့ က တစ်ခြားစီမို့လို့ငလျှင်ဘယ်နားလှုပ်သွားတာလည်း လို့ မေးယူရတဲ့အထိပါပဲ။ တစ်နှစ်အတွင်းမှာ
KOBE ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလည်းတိုးတတ်မှု့ နောက်ငလျှင်သင့် ပြည်သူတွေရဲ့ နေစရာအနေထားအဆင် သင့်ဖြစ်အောင်ပြန်လည်တည်ထောင်ပေးမှု့ လက်ရှိ ၁၄ နှစ်နီးပါးကျော်သွားပေမယ့် ဘယ်လိုမှ ပြန်ပီးမတည်ထောင်န်ိုင်လောက်တော့တဲ့
၀င်ငွေမရှိတော့တဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို တစ်ချို့(အရေတွက်ကတော့နည်းပါတယ်)
ငလျှင်သင့် ပြည်သူတို့ နေထိုင်နိုင်ရန်ဆိုတဲ့ ယာယီအဆောက်အဦးမှာ မှာဆက်လက်နေထိုင်ဆဲပါ။ (သူတို့ယာယီအဆောက်ဦးက အိမ်လိုပါပဲ သေးတာနဲ့ ကြီးတာလောက်ပဲ ကွာပါတယ်)
ငလျှင်အကြောင်းပြန်ဆက်ရလျှင် မျက်စိရှေ့မှာရှိနေတဲ့ KOBE တစ်နှစ်ကျော်အချိန်လေးမှာ အဲ့လောက်
ပြောင်းလည်း တိုးတက်ပီး ပြည်သူတွေ ပုံမှန်နေထိုင်သွားလာတာကို မြင်မိတော့ မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါ ပဲ။ ငလျှင်မှတ်တမ်းကိုဓာတ်ပုံပါတဲ့ စာအုပ်တွေ စာတမ်းတွေ လိုက်ရှာပီးကြည့်ပါတယ်။ အဲ့ဒီင်္ခေတ်က အင်တာနက်ခေတ်မဟုတ်သေးအလွယ်တစ်ကူ သိပ်မတွေ့ခဲ့ရဘူး။ အဆောင်တူတူနေတဲ့ မြန်မာဆရာ
တစ်ယောက်က ငလျှင်တုန်းက အတွေ့ကြုံကို ပြောပြပီး အဆောင်ရဲ့အက်ကွဲကြောင်းကိုပါပြပါတယ်။ KOBE နဲ့ အတော်လှမ်းတဲ့မြို့ ပေမယ် အဲ့လောက်အထိ ရိုက်ခတ်သွားတယ်ဆိုတာ သိသာမြင်သာခဲ့ပါတယ်။
စာရွက်စာတမ်းတွေလိုက်ရှာ နောက်ဆုံး ဓာတ်ပုံ စာအုပ်ရလာတော့ပြောင်းပြန်နီးပါးလန်နေတဲ့
ဟိုက်ဝေးလမ်းကြီးတွေ မီးခိုးတွေ မီးတွေလောင်နေတဲ့ပုံတွေက လောက ငရဲဆိုတာဒါများလားလို့ တောင်
လန့်သွားပါတယ်။ ပီးခဲ့သော နှစ်တွေက တရုတ်မှာ ဖြစ်သွားတဲ့ ငလျှင်ထက် အများကြီးကို ပျက်စီးနေတာပါ။ နောက်မနက်စောစော ရထားတွေ စပြီးပြေးစ မှာ လှုပ်သွားလို့သာပါ။ မနက် ၅း၄၅ မှာလှုပ်တာကိုး။ ရုံးချိန်သာဆိုဘယ်လောက် အသေအပျောက်များလိုက်မလည်းလို့ တွက်ချက်ပြကြပေါ့
၆၄၀၀ကျော်သေဆုံးနဲ့၃သောင်းကျော် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
ဟာ နိုင်ငံခြားသားတွေ အတော်ကြိုက်တဲ့မြို့ပါ။ တစ်ဘက်မှာတောင်တန်း တစ်ဘက်မှာကမ်းခြေနဲ့ မြို့က မော်ဒန်တိုက်တွေနဲ့ တခြားမြို့တွေနဲ့ နှိုင်းရင် ခေတ်မှီသစ်လွင်သလို နိုင်ငံခြားသင်္ဘောတွေ အကပ်များတဲ့ဆိပ်ကမ်း တစ်ခုလည်းဖြစ်နေတော့ အစားသောက်ဖွယ်ရာလည်းစုံလင်စွာဝယ်လို့ ရပါတယ်။ ဂျပန်မှာ yokohama ရယ် kobe ရယ်က တရုတ်တန်းရှိတဲ့ မြို့ ပါပဲ။
၁၉၉၅ ရဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာတော့ KOBE luminarie ဆိုပီးစလုပ်ပါတယ်။ အီတလီနိုင်ငံအစိုးရကနေ လှုဒါန်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကျွန်မက ၉၆ မှာ စရောက်တာ ဆိုတော့ ဒုတိယအကြိမ် မီးထွန်းခြင်းကိုမှီတယ်လို့ ဆိုရမှာပေါ့။
ဂျပန်ရဲ့ ကန်ဆိုင်းဒေသ ( အိုဆာကာ၊ ကျိုတ၊ို နာရာ၊ ကိုဘေး) မှာတော့ KOBE Luminarie ကနာမည်ကြီး ပွဲတော်လို့ ခေါ်ရမယ့်အထင်ကရတစ်ခုပါပဲ။
Luminarie ဆိုတာက ၁၆ ရာစုနှစ်ဟောင်းပိုင်းလောက်မှာ ဥရောပမှာ စတင်ပီး
ခေတ်စားလာတဲ့ မီးဖြင့် ပူဇော်ဆုတောင်းပွဲလုပ်တဲ့ အနုပညာတစ်ရပ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။။ ခုKOBEကလည်း ၁၉၉၅ ခုနှစ်ကနေ လက်ရှိ ၂၀၁၀ ထိ ကို နှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလတိုင်းမှာ တစ်နှစ်တစ်နှစ်
ခေါင်းစဉ်အမျိူးမျိူးတပ်ပီး ဒီဇိုင်းအမျိူးမျိူးနဲ့ ကျင်းပလာပါတယ်။ ၁၉၉၅တုန်းက ခေါင်းစဉ်က မျော်လင့်ချက် အိမ်မက်ဖြင့်အလင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ စတင်ခဲ့ပါတယ်။
အိုးအိမ်မဲ့သွားတဲ့ မိသားစုတွေ ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ သူတွေ ငလျှင်ကြောင့်သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေ အတွက် ဆုတောင်းပေးတဲ့အနေနဲ့ ပြုလုပ်ပေးခဲ့တာကို အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က လူတွေ က လာရောက်ပီး မီးထွန်းပွဲကို တစ်ကူးတစ်က ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် KOBE ရဲ့ ၀င်ငွေကို တိုးစေခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။စစခြင်းနှစ်မှာပဲ လူပေါင်း ၂၅သိန်း၎သောင်းကျော် နီးပါးလာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၀ရက်လောက်ကျင်းပတာပါ။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာတော့ လူပေါင်း ၃သန်းကျော်လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။
၀င်ငွေတိုးတယ်ဆိုလို့ လာကြည့်သူတွေ ကို ပိုက်ဆံကောက်တာမဟုတ်ပါဘူး ။အလကားကြည့်ရတာပါ။ အများစုက ရထားကို အသုံးပြုပြီးသွားကြတယ်လေ နောက်ပီး အဲ့ဒီဒေသရဲ့ထွက်ကုန် နာမည်ကြီး ကိုဘေး အမဲသား (KOBE GYU) KOBE ရဲ့ ချောကလက်တို့ နောက် KOBE မှာရှိတဲ့ တရုတ်တန်းရဲ့ ရောင်းအား နောက် အဲ့အချိန်နဲ့ ကိုက်မိနေတဲ့ကုန်တိုက်တွေရဲ့ Discount တွေက ရောင်းအားပိုမိုတတ်လာခြင်းကိုဆိုလိုတာပါ။
ဗော်လန်တီယာအုပ်စုတွေရဲ့ ယန်း၁၀၀ကန်ပိန်းကလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ နောက်နှစ်တွေလည်းဆက်ပီး ပြုလုပ်နိုင်ရန် ယန်း၁၀၀လှုကြပါ ဆိုတာလေးတွေ
တွေ့ရပါတယ်။ အလှူငွေထည့်တဲ့သူတွေကို luminarie ပုံပါတဲ့ ဖြတ်ပိုင်းလိုမျိုးလေးတွေ ပြန်ပေးပါတယ်။
Main pavilion မှာတော့ အလှူငွေပစ်ထည့်လို့ရတဲ့ ခေါင်းလောင်းပုံနေရာလေးကို ခရစ်စမတ်ကာလနဲ့လိုက်ဖက်အောင်လည်း ပြင်ပေးထားပါတယ်။ ထွန်းထားတဲ့ မီးတွေရယ် စည်းကမ်းရှိရှိ သွားနေကြတဲ့ လူတန်းကြီးရယ် လွင့်ပေးထားတဲ့ သီချင်းတီးလုံးတွေရယ်က လွမ်းမောစရာ
ဒီနှစ်KOBE Luminarie ရဲ့ ခေါင်းစဉ်က ဂျပန်လိုတော့ hikari no shinjou 光の心情　ရောင်စဉ်များ၏ ခံစားချက်လို့ ပဲ ဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ်။ ငလျှင်ဒဏ်သင့်ပြည်သူတွေကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူးဆိုတဲ့ အထိမ်းအမှတ်နဲ့ သူတို့ နှစ်စဉ်ပြုလုပ်နိူင်ရန် ကြိုးစားနေကြပါတယ် ဆိုတဲ့နယ်မြေခံတွေ
၀န်ထမ်းတွေ.... မရောက်တာကြာပီ ဖြစ်တဲ့ Kobe luminarie ကိုကြည့်ရင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ ကျွန်မတို့ ဆီက ဘ၀တွေကိုတွေးရင်း.............
(စိတ်ထဲမှာစာတွေရေးချင်နေပါတယ် ခုတစ်လောနည်းနည်းအားသွားတော့ ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းလေးတွေရေးချင်ပေမယ့် မျက်မှန်က ပါဝါတိုးတိုးနေပါတယ်... စာလုံးပေါင်းကျန်ခြင်းမှားခြင်းများသည်းခံဖတ်ပေးကြပါ။
မနေ့ကပို့စ်ကိုတင်လိုက်တာ လူဦးရေ တနေ့လာတဲံ့လူဦးရေကိုမှားပီးရေးမှိပါတယ်.စုစုပေါင်း ၂သိန်းကျော်ဆိုပီးရေးထားမိပါတယ်..၂၅ သိန်းကျော်ပါ.. ယခုပြင်လိုက်ပါပီ။
Posted by ကြည်ကြည် at 6:40 AM
Kay December 10, 2010 at 7:39 AM
ဒေသန္တရ ဗဟုသုတလေး ..
အဘွားလေး မျက်မှန် နဲ့ပုံမမြင်ဘူးသေး..း)
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) December 10, 2010 at 8:09 AM
မျက်စိတွေ မွဲနေပြီလား။ အသက်ကလေးကလဲ ထောက်လာပြီဆိုတော့ မှုန်မှုန်သုန်သုန် တုန်တုန်ချိချိ ဖြစ်နေရှာရောပေါ့။း)))
အဲဒီမီးထွန်းပွဲတော်လေးက စိတ်ထဲမှာ ကြည်နူးသလို ၀မ်းနည်းသလို ဖြစ်စေမှာ အမှန်ဘဲနော်။
ရွှေရတုမှတ်တမ်း December 10, 2010 at 9:19 AM
ကျမတို့ဆီက ဘဝတွေလဲ သာယာပါတယ် အဖွားရယ်..
အင်္ဂါဟူး December 10, 2010 at 10:30 AM
အဘွားလတ်ခင်ဗျာ.. သား စာတွေ ဖတ်သွားပါတယ်.. ခင်ဗျ..
မီးထွန်းပွဲလေး လှလိုက်တာနော်... အနော်တို့ဆီမှာတော့
ဘကျောက်ပြောသလိုပါပဲ မူးလိုက်ကြရူးလိုက်ကြ... ဆွဲလားရမ်းလားနဲ့ အသရေဖျက်လိုက်ကြ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြော်ငြာထိုးကြ ပျော်စရာဂျီးပါဗျာ..
ကြည်ကြည် December 10, 2010 at 6:12 PM
>မကေ...မြင်ဘူးတဲ့ပုံကို နွားနို့ ပလင်းဖင် အထူလောက်မျက်မှန်နဲ့တွဲကြည့်လိုက်..:)
>သူကြီး..မျက်လုံးမပါတဲ့ အဲ့လေ မျက်မှန်မပါတဲ့နေ့ဆို ကွန်ပြုတာကို လက်ကိုင်မှန်ဘီလူးနဲ့ ကြည့်တယ်.
>အင်္ဂါဟူး.....အမှန်ပါပဲ..ဒီမှာပွဲကြီးလမ်းကြီးတွေ မှာ ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ရှားပါတယ်..မုးယစ်သောက်စားပီးရမ်းတဲ့လူလည်းမရှိ..နေ့စဉ်လူက သိန်းဂဏန်းလာနေတာတောင် ဘာတစ်ခုမှ ရှော့မ၇ှိ
ဧပြီလမှ လုပ်တဲ့ ပန်းကြည့်ပွဲမှာတော့ တစ်ခါတစ်ခါ စကားများရန်ဖြစ်ပွဲလေးတွေ သတင်းမှာတွေ့ဘူးပါတယ်.
April December 11, 2010 at 4:06 AM
Really want to go after I read your post..
I missed that chance. Let's go again tomorrow. ;D
ကြည်ကြည် December 11, 2010 at 5:49 AM
It is worth but consider going alone..;D.
ချစ်ကြည်အေး December 11, 2010 at 8:16 PM
ဖတ်ကောင်းတယ် အဲလို ဒေသန္တရ ဗဟုသုတလေးတွေ အကြောင်း ဖတ်ရတာ ကြိုက်တယ်...ညီမကြည်ကြည်က ကိုဘေးမှာ နေတာလားဟင် ၉၆ထဲကဆို ကြာလှပြီပဲ...
ကြည်ကြည် December 12, 2010 at 1:55 AM
၉၆ ကနေ တောက်လျှောက်မနေဘူးပါဘူး မချစ်ရယ် ..
ဘ၀သမားလေ ရေကြည်ရာမြက်နုရာ ၇ှာစားရတော့ မချစ်ရာ...း)
သားထူး December 12, 2010 at 8:34 AM
မကြည် ပုံတွေမြင်ရ ၊ စာတွေဖတ်ရတာ စိတ်ချမ်းသာတယ်ဗျာ့
ယွန်း December 14, 2010 at 7:26 PM
မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာလေးတွေ မြင်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ..
ပထမဆုံး အလည်ရောက်လာရင်း စာတွေဖတ်သွားတယ်နော်..